DKMG iyo Shabaab oo dagaal qasaaro gaystay ku dhexmaray Muqdisho | raascasayrmedia.com
← Dhulgariir tsunami wata oo ka dhacay Jaban (Sawiro )
Banaanbax lagu taageerayay Shabaab oo ka dhacay Kismaayo →
March 12, 2011 · 3:09 pm
DKMG iyo Shabaab oo dagaal qasaaro gaystay ku dhexmaray Muqdisho
Dagaalo iyo duqeymo u dhaxeeya ciidamada dowladda KMG Soomaaliya oo taageero ka helaya kuwa AMISOM iyo Xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab ayaa saakay waxaa ay ka dhaceen degmooyinka ka tirsan gobolka Banaadir.
Dagaalkaani oo waabarigii hore ee saakay ka qarxay xaafado ka mid ah degmooyinka Hodan iyo Howlwadaag ee gobolka Banaadir ayaa waxaa uu u dhaxeeyay ciidamada dowladda KMG Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo isku dhinac ah iyo Xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab.
Dagaalka ayaa la sheegay in uu yimid kadib markii ciidamada Xarakada Shabaab ay weerar ku qaadeen fariisimo ciidamada dowladda KMG iyo kuwa AMISOM ay ku lahaayeen degmooyinkaasi gaar ahaan nawaaxiga wadada shaqaalaha iyo Isgoyska Debka halkaasi oo dagaalku si xoogan ugu dhacay.
Inta la’ogyahay 1-ruux ayaa ku dhintay 5-kalana way ku dhaawacmeen kuwaasi oo ahaa dad rayid ah, waxaana dadkaasi waxyeeleeyay rasaasta iyo madaafiicda xoogan oo ay labada dhinac is weedaarsadeen.
Majiro wax war ah oo kasoo baxay dhinacyadii dagaalamay saakay oo ku aadan qasaaraha soo kala gaaray wallow goobjoogayaal ku sugan halkaasi ay sheegayaan inay jiraan dhaawacyo soo kala gaaray dhinacyada halkaasi ku dagaalamay.
Dagaalada inta badan ka dhaca magaalada Muqdisho ayaa waxaa ay waxyeelo kasoo gaartaa dadka rayid ah oo aan waxba galabsan, iyadoo dhinacyada ku dagaalamaya magaalada Muqdisho aan jirin cid u naxda shacabka dhiiga kaga baxay dagaaladaasi.